Buundooyinka, guryo aan caadi ahayn oo midab leh, carafta pizza iyo Aperol, samee Venice a meel aan ku riyoodo loogu talo galay in magaalada loo nasto ee Yurub. Cabbirkeeda yar, matxafyada, iyo indhooleyaashu waxay kaa dhigi doonaan inaad mashquul ku ahaato nasasho toddobaad iyo dheer oo gaaban. Had iyo jeer waxaa jira piazza yar oo u dhow geeska xarunta mashquulka badan, halkaad dib ugu fadhiisan karto, leeyihiin cappuccino iyo panini, ama naftaada u daawee Pizza delicious shooladda hore.
Xilliga guga Amsterdam waxay ubaxaysaa midabo midabo leh meel walbana aad u jeceshahay waxay u egtahay kaadhka boostada. Kanaalada, doomaha, baaskiilada, iyo ubaxyadu waxay sugayaan inay midabeeyaan albumkaaga sawirka. Ka bilow matxafka Tulip ka dibna u gudub Jordaan, maqaaxiyo badan iyo dukaamo yar yar oo maxalli ah, ama beeraha Oost iyo Rembrandt ee a raaxo iyo raaxo.
Haddii aad leedahay ilig macaan, waxaad gabi ahaanba lahaan doontaa fasax birifaad cajiib ah magaalada Brussels. Brussels waxbadan ayey ku wadaagi karaan oo ku tusi karaan, sida ay u jecel yihiin shukulaatada caanka ah ee adduunka iyo waffles. Intaa waxaa dheer, in ka badan 100 madxafyada ayaa kugu sugaya Brussels. Ka dib markaad booqato kuwa ugu wanaagsan waxaad aadi kartaa rue Danseart si aad u hesho qaniinyo si aad wax uga cunto makhaayadaha ugu fiican. Jawharad kale oo ku taal Brussels waa Goob qurux badan oo loo yaqaan 'Sainte-Catherine' iyo qurux iyo dhaqan Chatelain.
Mid ka mid ah waxyaabaha ugu wanaagsan ee lagu sameeyo Budapest waa in doon lagu raaco webiga Danube. Habka ugu wanaagsan ee loo bogi karo magaalada iyo dhismaha ku yaal Budapest waa doon. Iyada oo leh waxqabadyo waaweyn oo bannaanka iyo gudaha ah, Magaalada caasimada ah ee Hungary ayaa dhibco sare leh 10 magaalooyinka ugu fiican ee jabsanaya Yurub.
Baadhista buundooyinka, booqo qubeyska kuleylka caadiga ah, oo dhadhamiya cunnada cunnida Huaariga ah waa waxyaabo ay tahay inaad sameyso si aad u dareento degmo Budapest ah. Sidoo kale, Hubso inaad booqato Matthias Church, Kalluumeysiga kalluumeysiga, iyo baarlamaanka aragti qorrax ka soo baxa magaalada.
halkan at Save A tareenka, waxaan ku faraxsanaan doonnaa inaan kaa caawino helitaanka tikidhada tareenka ugu raqiisan mid ka mid ah meelaha quruxda badan ee magaalada aad jeceshahay inaad qorsheyso!
Ma waxaad dooneysaa inaad ku dhejiso bartayada blog-ka "10 ugu fiican Magaalada Breaks ee Yurub" boggaaga? Waxaad ka qaadi kartaa sawiro iyo qoraal iyo na siiso credit la link a si post blog this. Ama guji halkan: https://iframely.com/embed/https://www.saveatrain.com/blog/best-city-breaks-europe/?lang=so የሰማይ አካላት– (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)